Maxaa Laga Bartay Cayaartii Finalka ee Rael Madrid iyo Liverpool – Gool FM
( Kiev ) 26 Maajo 2018. Real Madrid ayaa markale taariikh u dhigtay koobka kooxaha yurub ee Champions League iyagoo ku guuleystay markii seddaxaad oo xariir ah.
Los Blancos ayaa 3-1 kaga adkaatay Liverpool kulankii kama dambeysa tartanka oo ka dhacay Kiev waxayna kaga mahad celinayaa goolsha ay ku badiyeen xiddigaheeda kala ah Karim Banzema iyo Gareth Bale oo labo gool dhaliyay xili uu badal ku yimid.
Kooxda Madrid oo ugu hanashada badan taariikhda koobkan ayaa iminka diiwaan galisay koobkii 13-aad ee Champions League.
Habada Maxa laga diiwaan galiyay Cayaarta Labada Koox dhexmartay
Liverpool ayaa sameysay sagaal shuud qeybta kowaad cayaarta inta uu garoonka ku jiray Mohamed Salah.
Garsooraha cayaarta ayaa wax qalad ah ka dhigin kadib afar qalad uu galay Sergio Ramos qeybta kowaad cayaarta.
Karim Benzema ayaa noqday laacibkii u horeyay ee Frenca kasoo jeeda ee gool ka dhaliyaa finalka Champions League tan iyo Zinédine Zidane finalkii 2002.
Karim Benzema ayaa ka dhaliyay afar gool kooxda Liverpool tartanka Champions League; Ma jiro cayaariyahan kaga badan sido kale Didier Drogba ayaa afar gool ka dhaliyay.
Sadio Mané waa xiddiga afaraad ee African ah kasoo gool ka dhaliyay finaalka tartanka European Cup ama Champions League kadib: Rabah Madjer, Samuel Eto’o, iyo Didier Drogb.
Liverpool waa kooxdii u horeysay taariikhda ay seddax cayaariyahan u dhaliyaan min 10 gool hal xagaa tartanka Champions League kadib (Salah 10, Firmino 10, Mané 10).
Sadio Mané ayaa u baahday kaliya 11 kulan inuu ku gaaro 10 gool koobka Champions League, wuxuuna kula biiray rikoorkaas Roberto Firmino iyo Adriano.
Gareth Bale ayay ku qaadatay 122 il biriqsi goolka uu ka dhaliyay Liverpool kadib markii uu badal ku yimid.
Gareth Bale waa cayaariyahankii u horeyay ee laba gool dhaliyaa isagoo badal ku yimid finaalka Champions League ama European Cup.
Loris Karius ayaa sameyay qaladaad badan cayaarta Liverpool wuxuuna sabab u noqday laba gool taaso uusan sameyn 32 kulan uu goolka uga cayaaray tartamada xagaagan 2017-18.
Zinedine Zidane ayaa noqday macalinkii u horeyay ee saddax sano xariir ah ku guuleysta tartanka European Cup ama Champions League.
Real Madrid ayaa noqotay kooxdii u horeysay ee saddax sano xariir ah ku guuleysta tartanka European Cup ama Champions League tan iyo Bayern Munich intii u dhaxeysay 1974 iyo 1976.
Kooxaha England ayay soo gaareysay guuldaro todobadii final ee tartan yurub ah oo ay wajahaan naadiyada Spain uusan ku jirin Finalka Uefa Super Cup waxayna ku guuldareysteen 4 Champions League iyo 3 UEFA Cup ama Europa League.
Jurgen Klopp ayaa iminka ku guuldareysanaya lix kamida todoba finaal waa wayn uu maamulay 2 finaal waa DFB-Pokal, 2 waa Champions League, 1 waa League Cup, 1 waa UEFA Europa League, kaliya wuxuu ku guuleystay DFB-Pokal uu u qaaday Borussia Dortmund sanadkii 2012-kii.